Fepetran-tserivisy. Fomba iray hifankahitan'ny olon-dehibe amin'ny Internet
Toerana mampiaraka siramamy
Ny serivisy Sugarlove1 dia an'ny olon-dehibe ihany (tokony ho 18 taona farafahakeliny).
Ny serivisy Sugarlove® dia fomba iray hihaonan'ny olon-dehibe amin'ny Internet.
Ity dia fifanarahana ara-dalàna ("Fifanarahana") eo aminareo sy Sugarlove®. Azafady vakio tsara ny fifanarahana alohan'ny fisoratana anarana. Amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana dia lasa mpikambana ao amin'ny Sugarlove® («mpikambana») ianao ary manaiky ny hofehezin'ireo fepetra sy fifanarahana amin'ity fifanarahana ity (ny "Terms") raha mbola mijanona ho mpikambana ianao. Raha tsy manaiky ny fepetra ianao dia tsy mahazo mampiasa Sugarlove®.
Mahazoa fiasa sy fiasa feno miaraka amin'ny fisoratana anarana VIP, ao anatin'izany ny chat sy ny hafatra tsy miankina FREE.
FANAMARIHANA: Ianao dia afaka hanafoana ny VIP Membership Amin'ny fotoana rehetra avy amin'ny kaontinao! Ny ekipa mpanohana Sugarlove® dia vonona foana hanampy sy hanampy anao 24/7. Alefaso fotsiny izahay fangatahana fanampiana avy amin'ny "Mifandraisa aminay”Pejy ary hiverina aminao izahay afaka 1 andro fiasana!
Fandraisana mpikambana Miaraka koa A VIP Bad voamarina Ampifamadiho amin'ny mombamomba anao.
Ny fepetra dia miova amin'ny Sugarlove amin'ny fotoana rehetra, tsy misy fampandrenesana, mahomby amin'ny famoahana rohy iray mitovy ao amin'ny tranokalanay (https://www.sugarlove.one). Ny zaza tsy ampy taona (ao anatin'ny 18 taona) dia mety tsy lasa mpikambana. Rehefa misoratra anarana ianao, ary indraindray dia avy eo dia asain'ny Sugarlove hanome anao fanazavana ampy hanondroana fa 18 taona farafahakeliny ianao. Amin'ny maha-mpikambana anao dia misolo tena sy manome antoka ianao fa efa 18 farafahakeliny taona ianao.
Na ianao na Sugarlove dia afaka mamarana ny maha-mpikambana anao amin'ny Sugarlove amin'ny fotoana rehetra, na inona na inona antony, dia mahomby amin'ny fandefasana fampandrenesana an-tsoratra amin'ny fety hafa. Ny Sugarlove dia manana zo hanana fampiatoana avy hatrany sy hampitsaharana ny fidiranao amin'ny serivisy Sugarlove, tsy misy fanamarihana, na inona na inona fandikan'ity fifanarahana izay ataonao hojeren'ny Sugarlove ity.
Ny maha-mpikambana anao amin'ny serivisy Sugarlove dia natao ho an'ny tenanao manokana. Mety tsy manome alalana ny hafa hampiasa ny maha-mpikambana anao ianao, ary mety tsy hanendry na mamindra ny kaontinao amin'ny olon-kafa na sampandraharaha hafa.
Online / Fitondran-tena
Amin'ny maha mpikambana anao, manaiky ianao fa:
Ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny votoatiny na fampahalalana izay avoaka na asehonao (aorian'izany, "post") amin'ny serivisy Sugarlove, na ampitao amin'ireo mpikambana Sugarlove hafa.
Tsy misy fandeferana amin'ny votoaty manohitra. TSY MAINAO eo amin'ny serivisy Sugarlove ianao, na mifindra amin'ireo mpikambana na mpiasa Sugarlove hafa, misy fanalam-baraka, tsy marina, manendrikendrika, manala baraka, manala baraka, manafintohina, manao firaisana, mandrahona, manelingelina, manafintohina olona, ​​na fitaovana tsy ara-dalàna, na fitaovana hafa manitsakitsaka. na manitsakitsaka ny zon'ny antoko hafa (tafiditra ao, fa tsy voafetra ho an'ny, zon'ny fananana ara-tsaina ary zon'ny fiainana manokana sy ny filazam-baovao).
Hampiasa ny serivisy Sugarlove amin'ny fomba mifanaraka amin'ny lalàna sy fitsipika rehetra azo ampiharina ianao. Tsy hampiditra ao amin'ny mombamomba anao izay laharana an-tariby, adiresy an-dalambe, anarana farany, URL, adiresy imailaka, fandikan-tena anatomika na fanaratsiana ara-nofo, na fiteny manaitaitra na fiteny manafintohina, ary tsy handefa sary misy fitadiavana fananana na fampahalalana ho an'ny tena manokana ianao. . Ny Sugarlove dia manana ny zo, fa tsy manana adidy, mandà ny mombamomba na sary izay tsy mifanaraka amin'ireto.
Tsy hiditra amin'ny dokam-barotra ananan'ireo mpikambana hafa ianao hividy na hivarotra vokatra na serivisy amin'ny alàlan'ny serivisy. Tsy handefa taratasy misy rojo na mailaka amin'ny mpikambana Sugarlove hafa ianao.
Tsy hamoaka na hizara na hanomezany na inona na inona ny loharanom-baovao voarakitra an-tsoratra, mari-pamantarana, na fampahalalam-baovao hafa tsy mahazo alalana avy amin'ny tompon'ireo zo manan-danja ireo.
Ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny fifandraisanao amin'ireo mpikambana Sugarlove hafa. Ny Sugarlove dia manana ny zo, nefa tsy misy adidy, hanara-maso ny fifandirana eo aminareo sy ny mpikambana hafa. Ny tsy fanitsakitsahana rehetra dia mety hitarika fanafody ara-dalàna ho an'ny Sugarlove
Fahatokiana ataon'ny mpikambana
Ianao dia hiaro, hanomezana tsiny ary hihazona Sugarlove tsy manimba, ny manampahefana, ny talen'ny mpiasa, ny mpiasa, ny mpandraharaha ary ny antoko fahatelo, na inona na inona fatiantoka, vidiny, adidy ary fandaniana (ao anatin'izany ny saram-pitsarana mpisolovava) mifandraika na mivoaka amin'ny fampiasana ny Sugarlove Serviceluding, fa tsy voafetra ho, misy fanitsakitsahana ataon'ireo fifanarahana amin'ity fifanarahana ity.
Ny eritreritra, torohevitra, fanambarana, tolotra, na fampahalalana na hevitra hafa azo amin'ny alàlan'ny serivisy Sugarlove dia an'ny mpanoratra azy manokana fa tsy avy amin'ny Sugarlove, ary tsy tokony hiankina amin'ny finoana. Ny mpanoratra toy izany dia tompon'andraikitra afa-po amin'ny atiny toy izany. Sugarlove dia tsy manome antoka ny marina, ny fahafenoana, na ny mahasoa ny fampahalalana momba ny serivisy ary tsy misy manaiky sy manohana ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fahatokisana na ny fahatokisana ny hevitra, torohevitra na fanambarana natao. Na inona na inona toe-javatra dia i Sugarlove no tompon'andraikitra amin'ny fatiantoka na fahavoazana vokatry ny fahatokisan'ny olona amin'ny fampahalalana na votoaty hafa napetraka tao amin'ny Sugarlove Service, na nampitaina tamin'ireo mpikambana Sugarlove.
FAMPIANARANA - VOLA VONY: Mety misy mpikambana Sugarlove na mpampiasa hafa (anisan'izany ireo mpampiasa tsy nahazo alàlana, na "mpijirika") mety handefa na mandefa fitaovana manafintohina na vetaveta eo amin'ny Serivisy Sugarlove ary mety tsy hampiasa an-tsitrapo an'io fitaovana manafintohina na vetaveta io. Azo atao koa ny mahazo ny hafa hahazo fampahalalana momba anao noho ny fampiasanao ny serivisy, ary mety hampiasa fampahalalana toy izany ny mpahazo ka handratra anao. Sugarlove dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fampiasana fampahalalana manokana izay azonao safidinao hambara amin'ny serivisy. Fidio azafady ilay karazana fampahalalana izay halefanao ao amin'ny serivisy Sugarlove na amboary amin'ny hafa.
Sugarlove dia manana ny zo, fa tsy adidy kosa, mba hanaraha-maso ireo fitaovana napetraka ao amin'ny faritra ho an'ny Serivisy Sugarlove. Sugarlove dia manan-jo hanaisotra ireo fitaovana izay manitsakitsaka, na voalaza fa mandika, ny lalàna, na ity fifanarahana ity. Na eo aza izany zo izany amin'ny Sugarlove, mijanona ho tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny fitaovana alefanao ao amin'ny faritra misy ny serivisy sy ireo mailaka mailaka anao manokana ianao. Ny mailaka nalefa teo aminao sy ny mpikambana Sugarlove hafa izay tsy mora azon'ny besinimaro dia ho raisina manokana ho an'ny tenin'i Sugarlove araka izay takian'ny lalàna ampiharina.
Fanesorana ny fampahalalam-baovao
Na dia tsy afaka mamerina mamaky ny hafatra rehetra nalefan'ireo mpampiasa ny Service aza izahay ary tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ireo hafatra ireo, dia mamaritra ny zon'olombelona izahay, saingy tsy voatery hamafa na hamindra ny votoaty, anisan'izany ny tsy fisian'ny fanitsakitsahana ny mombamomba azy, ny famoahana ampahibemaso ary hafatra, fa isika, amin'ny fisainantsika irery ihany, dia heverina ho fanitsakitsahana ny fehezin'ny fitondran-tena napetraka etsy ambony na ireo toro-làlana mifandraika amin'ny votoatin-javatra, na tsy azo ekena. Hijanona ho tompon'andraikitra afa-tsy ny votoatin'ny profiles, ny famoahana ampahibemaso sy hafatra izay azonao alefa na manoratra amin'ny serivisy na mandefa ny mpampiasa ny Service.
Sugarlove dia manana sy mihazona ny zo fananana hafa ao amin'ny Sugarlove Service. Ny serivisy dia mirakitra ny zavatra zon'ny mpamorona, marika, ary fampahalalana momba ny Sugarlove sy ireo fahazoan-dàlana. Ankoatr'izay, ny mpikambana hafa dia mety handefa ny zon'ny mpamorona manana ny zon'ny mpamorona, izay miaro ny zon'ny mpamorona na dia voamarina fa zon'ny mpamorona. Raha tsy misy izany fampahalalana izay eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe na nomenao alalana anao dia tsy handika, hanova, hamoaka, hamindra, hizara, hanao, hampiseho, na mivarotra ny mombamomba ny fananana toy izany ianao.
Amin'ny alàlan'ny fandefasana vaovao na votoaty any amin'ny sehatra rehetra an'ny Sugarlove, manome anao ho azy avy hatrany ianao ary misolo tena sy manome alalana anao fa manana alalana omena, amin'ny Sugarlove sy ireo mpikambana Sugarlove hafa dia tsy azo ovana, maharitra, tsy manokana, feno, manonja eran'izao tontolo izao. mampiasa, mandika, manatanteraka, mampiseho ary mizara vaovao sy atiny toy izany ary hanomanana ny asa vokarina, na mampiditra amina asa hafa, fampahalalana sy votoaty toy izany, ary hanome sy manome alalana ny votoatin'ny teo aloha.
Fampahafantarana avy amin'ny mpikambana
Afa-tsy voalaza ao amin'ny politika momba ny fiainana manokana an'ny Sugarlove, ny tsiambaratelo Sugarlove dia hanafina amina tsiambaratelo ny fampahalalana rehetra nomeninao anao amin'ny laharana karatra Sugarloveluding, ary mampiasa na mamoaka izany fampahalalana izany ho an'ny antony nanangonana ireo fampahalalana toy izany na notakian'ny lalàna. .
Feo sy fandoavana finday
Na inona na inona fanontaniana na fifandirana mikasika ny faktiora, ny saram-panafana na ny fandoavam-bola dia tokony halefa any amin'ny mpanome tolotra finday fahatelo anao.
Sugarlove dia manome ny Sugarlove serivisy amin'ny alàlan'ny "toy ny" ary tsy manome antoka amin'ny karazany, voambara, voafehina, statutory, mifandraika amin'ny serivisy na mifandray amin'ny Sugarlove na ny solontenany, na amin'ny fomba hafa momba ny serivisy. . Sugarlove manokana dia manisy fahazoan-dàlana manokana momba ny fivarotana varotra, fahasalamana ho an'ny tanjona manokana na tsy fanitsakitsahana. Sugarlove dia tsy manome antoka fa ny fampiasana ny serivisy Sugarlove dia ho azo antoka, tsy tapaka, vonona, na tsy misy hadisoana, na mahafeno ny zavatra takiana anao, na hanitsy izay lesoka ao amin'ny serivisy. Sugarlove dia manambara ny andraikitra momba ny, ary tsy misy antoka manome alalana, momba ny fandrakofana serviceluding an-tariby, isan-karazany, na fanelingelenana amin'ny serivisy an-tariby.
Na inona na inona, Sugarlove dia ho tompon'andraikitra aminao (i) aminao noho ny fahavoazana azo avy amin'ny vokatra, vokatra, na ankolaka (tafiditra ao, fa tsy voafetra ihany, fahavoazana noho ny fahaverezan'ny data, ny fahaverezan'ny fandaharan'asa, ny tombony, ny vidin'ny fidirana serivisy fanoloana na ny serivisy. fanelingelenana) nipoitra noho ny fampiasana na tsy fahaizana mampiasa ny Sugarlove Service, na dia Sugarlove na ireo mpisolo tena na ny solontenany no mahalala na nanoroana ny mety hisian'ireo fahavoazana toy izany na (ii) amin'ireo olona hafa ankoatra anao. Na eo aza izany rehetra izany, ny Sugarlove's. tompon'andraikitra aminao amin'ny antony rehetra na inona na inona, ary na manao ahoana na manao ahoana ny hetsika, dia voafetra hatrany amin'ny sandan'ny karama, raha misy, avy amin'i anao Sugarlove amin'ny serivisy mandritra ny fotoana maha-mpikambana.
Ankoatr'izany, ny Sugarlove dia manilika ny andraikitra rehetra, na inona na inona endrika, amin'ny fihetsika na ny fanilikilihana ireo mpikambana na mpampiasa hafa (tafiditra ao, fa tsy voafetra ho an'ny mpampiasa tsy nahazo alalana, na "mpijirika") ny Sugarlove Service.
Ny fepetra sasany dia mametra ny fampiharana ny lisansa ho an'ny fanomezan-dàlana sy ny fetran'ny andraikitry ny tompon'andraikitry ny fanomezan-dàlana ary ny fepetra takiana amin'ny tompon'andraikitra.
Manaiky ianao fa ny lalàna Florida (na inona na inona fifanoherana ny fitsipiky ny lalàna) dia mifehy ity fifanarahana ity, fa ny fifandirana rehetra nipoitra na nifandray tamin'ity fifanarahana ity dia miankina amin'ny toerana manokana an'ny fitsarana federaly sy fanjakana ao amin'ny State Florida, ary izany manolotra ny fahefana manokana an'ny tribonaly federaly sy fanjakana any amin'ny State Florida ianao amin'ny fifandraisana amin'ny serivisy na ity fifanarahana ity. Ity fifanarahana ity, nekena taorian'ny fisoratana anarana ho an'ny serivisy Sugarlove, dia mirakitra ny fifanarahana rehetra misy eo aminao sy Sugarlove momba ny fampiasana ny serivisy. Ity fifanarahana ity dia mety hovaina ihany raha tsy efa voamarik'i Sugarlove aminao, na amin'ny taratasy nanoratana anao ary tompon'andraikitra iray avy amin'ny Sugarlove raha tsy voalaza mazava, dia ho tapitra ny fitsipiky ny maha-mpikambana anao amin'ny serivisy. Raha toa ka tsy mitombina ny fandaharana an'ity fifanarahana ity, ny ambin'ity fifanarahana ity dia hitohy amin'ny fomba feno sy amin'ny fampiharana.
Sugarlove dia hamerina ny famerenam-bola ao anatin'ny 72 ora famandrihana voalohany raha tsy nisy ny fampiasana ny Serivisy iray. Ankoatr'ireo fepetra ireo, ny fangatahana famerenam-bola dia hitovy amin'ny fahefan'i Sugarlove ary hojerena amin'ny mpikambana iray isaky ny mpikambana.
Famaranana ny tombontsoa avy amin'ny mpampiasa ho an'ny fanitsakitsahana sy ny fifandraisana momba ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona:
Hofoananay ny tombontsoan'ny mpampiasa izay mampiasa ity tranokala ity mba handefasana tsy ara-dalàna ny fananana zon'ny mpamorona tsy misy fahazoan-dàlana, ny fanekena an-tsoratra, ny fiarovana miaro tena na ny fanararaotana ara-drariny hanaovana izany. Ho an'ny manokana, ireo mpampiasa izay mametraka ny votoatin'ny mpampiasa amin'ity tranonkala ity, na lahatsoratra, sary, tantara, rindrambaiko na fitaovana hafa momba ny zon'ny mpamorona dia tokony hiantoka fa tsy manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona na ny zon'ny olon-kafa ireo votoaty (toy ny fiainana manokana na ny zon'ny vahoaka). . Taorian'ny fampandrenesana tsara ny tompon'ny zon'ny mpamorona na izany dia mpisolo toerana anay, ary ny fanamafisana amin'ny alàlan'ny baikon'ny fitsarana na ny faneken'ny mpampiasa azy fa nampiasa ny tranonkala ity izy ho fitaovana fanitsakitsahana tsy fanarahan-dalàna dia hatsanganay ny zon'ny mpampiasa mpandika lalàna. na miditra amin'ity tranokala ity. Azontsika atao ihany koa ny manapa-kevitra hanafoana ny zon'ny mpampiasa hampiasa na hidirana amin'ny tranokala alohan'io fotoana io raha toa ka manana finoana tsara isika fa niseho ny tsy fanarahan-dalàna niseho.
Daty Mpikambana Legit Ao Amin'ny Vondrona VIP!
TANDREMO: Profil raha tsy misy etsy ambony VIP-mpikambana ny badge dia tsy voamarina ary mety tsy ara-dalàna!
Chat sy Messenger maimaimpoana!
Nanapa-kevitra ny hanome anao maimaimpoana ➤ Chat & Messenger Messenger manokana izahay. Fantatray fa azonao ampiasaina fotsiny bokotra / bokotra Tatitra, raha mandefa spam anao ny mpampiasa na manandrana mampifaly anao!
➤ Chat Free izao!
Mampiasa cookies izahay hanomezana traikefa tsara indrindra amin'ny tranokalanay.
Azonao atao ny mahita bebe kokoa momba ny cookies izay ampiasainay na hanodina azy ireo Fikirana.
Akatona ny fikirana Cookie GDPR
Mila Cookies tena ilaina
Powered by Fankatoavana ny Cookie GDPR
Mampiasa cookies ity tranonkala ity mba hahafahantsika manome anao ny traikefan'ny mpampiasa indrindra azo atao. Ny fampahalalana cookie dia voarakitra ao amin'ny tranokalanao ary manatanteraka asa toy ny fanekena anao rehefa miverina ao amin'ny tranokalanay ianao ary manampy ny ekipanay hahatakatra hoe iza amin'ireo ampahany amin'ny tranonkala izay hitanao fa mahaliana indrindra sy ilaina.
Tokony atao amin'ny fotoana rehetra ny Cookie ilaina mba hahafahantsika mamonjy ny safidy ataonareo amin'ny fikirakirana cookie.
Alefaso na alao ny cookies
Raha tsy mandeha ity cookie ity dia tsy ho voataninay ny safidinao. Midika izany fa isaky ny mitsidika an'ity tranonkala ity ianao dia mila mampandeha na manafoana cookies indray.
Alefa ny rehetra